Challenge The Good News Paper - Kwakungesiyo inhlanhla, Kwakungu-Jesu (Zulu)
Kwakungesiyo inhlanhla, Kwakungu-Jesu (Zulu)
Noel and his wife Mavis can attest to the joy and satisfaction found in following Jesus and living your life for Him.
Ngo 2009,uNoel Moses wayefunda iphephandaba langesonto e library ngendoda eneminyaka engu 80 eyayithola usizo esbhedlela. Lokho Kwakhuthaza uNoel,owaneminyaka e wu 60 ngalesosikhathi, ukuyohlola inhliziyo, okwatholakala ukuthi imithambo ehambisa igazi ivimbekile.
Udokotela wathola ukuthi umthambo omkhulu uvimbeke kakhulu,kangangokuthi wayesalelwe amaviki amabili ukuthi aphile ngaphandle kokuthi kwenziwe okuthile.Wahlinzwa inhliziyo ngenkulu impumelelo.
"Abantu abaningi bamtshela ukuthi unenhlanhla",kusho yena."Kodwa angikholelwa enhlanhleni, ngikholwa ku Jesu Krestu".
Ngalesikhathi, uNoel wayenesikhathi eside azana no Jesu,wanikela impilo yakhe ku Jesu esemusha.
Impilo yobu Kristu yayiyinxenye yobusha bakhe,Ugogo ka Noel wayeyikholwa eliqinile,elaba nomthelela omkhulu empilweni yakhe.Wayeyilunga lebandla.
Kodwa,impilo yayingelula.Abazali baka Noel bahlukana ena 5, kwakunzima ezimalini umamakhe ekhulisa ingane eziwu – 5 ngemali encane ngo 1950.
Uma eneminyake ewu 15 uNoel,washayiswa imoto wathathwa i ambulance.Wayangalimela kakhulu,kodwa lesisigameko samthusa kakhulu wanquma ukwenza ingunaphakade lakhe liqiniseka.
Nangalesosikhathi,uNoel wayazi ukuthi akusiyona inhlanhla ehlenge impilo yakhe,u Jesu Kristu.
Wathandaza unthandazo wesoni ecela uNkulunkulu amthethelele izono futhi abe iNkosi yempilo yakhe.Kusukela ngalesosikhathi wayekhuthele ukutshela abantu ngethemba alithola ku Jesu.
"Ubufakazi bami sengibutshele abantu abadlula u 10,000 ngabanye, namaqembu, kwelakithi naphesheya"kusho yena,Usehambele I Australia, Sri Lanka ,England nase Scotland , izithombe eziku Facebook ziyamfakazela, Kusho uNoel Moses.
uNoel usakaza umyalezo wothando luka Nkulunkulu ngokunikezana ngencwadi ka Johane,nephephandaba le Challenge!
Ukhuthaza abanye."Isingumo esibalulekile empilweni yakho ukuthi wenzani ngo Jesu.Kukuhlelela ingunaphakade lakho ezulwini noma esihogweni.
Yingakho, "Mthembe uNkulunkulu ngayoyonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho ukuqonda. Ezindleleni zakho zonke bheka Yena, Uzoqondisa indlela zakho."(Izaga 3:5-6)uNoel eluleka.
Elinye i vesi alithandayo u Johane 3:16."Ngokuba uNkulumkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa , ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade.
Njengoba esho uNoel, akusiyona inhlanhla kodwa Jesu ukuthi u funde lendaba ukuze uzinikele kuye namhlnje.
Uma ndinga usizo ngalokhu,vula ikhasi 7 lalephepha kune siqephu esiyalayo.•
<< Nie per geluk nie, nét Jesus (Afrikaans)
NdiJesu harisi rombo rakanaka (Shona) >>